Nihaona tamin'ny kaomisera ambony kanadiana vaovao tany Jamaika ny minisitry ny fizahantany any Jamaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Nihaona tamin'ny kaomisera ambony kanadiana vaovao tany Jamaika ny minisitry ny fizahantany any Jamaika
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Kaomisera ambony any Canada ho an'ny Jamaika sy ny minisitry ny fizahantany any Jamaika
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, manolotra komisiona ambony kanadiana vao voatendry ho an'i Jamaika, ny praiminisitra Emina Tudakovic, (jereo ankavia amin'ny sary) miaraka amin'ny fankasitrahana manokana.
Nihaona tamin'ny Hon. Ny minisitra Bartlett ao amin'ny biraon'ny Kingston Vaovao.
Nifanakalo hevitra momba ny fomba hanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta amin'ny sehatra toa ny fanabeazana sy ny fiofanana izy ireo.
Eo amin'ny latabatra ihany koa ny mety hisian'ny fiarahan'i Kanada miaraka amin'i Jamaika hanokatra ivon-toerana zanabolana an'ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center.
Ny fotoana dia fiantsoana ara-pomba fanajana nataon'ny Minisitra Tudakovic tamin'ny Minisitra ny 11 Aogositra 2021 tao amin'ny New Kingston Office-ny.
Nandritra ny fivorian'izy ireo dia nifanakalo hevitra momba ny fomba hanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta amin'ny sehatra toa ny fanabeazana sy ny fiofanana izy ireo. Noresahin'izy ireo ihany koa ny mety hisian'ny fiarahan'i Kanada miaraka amin'i Jamaika hanokatra ivon-toerana zanabolana an'ny Global Tour Resilience and Crisis Management Center.
The Jamaika Ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny masoivohony dia manao iraka hanatsara sy hanova ny vokatra fizahan-tany any Jamaika, na dia miantoka aza ny tombony azo avy amin'ny sehatry ny fizahantany ho an'ny Jamaikana rehetra. Noho izany antony izany dia nampihatra ny politika sy ny paikady izay hanomezana vahana ny fizahan-tany ho motera fitomboan'ny toekarena Jamaikana. Ny Minisitera dia tapa-kevitra hatrany hanome antoka fa ny sehatry ny fizahan-tany dia manome ny anjara birikiny farany amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ao Jamaika raha manana ny fahafaha-mitombo.
Ao amin'ny Minisitera, izy ireo dia mitarika ny fanamafisana ny fifandraisana misy eo amin'ny fizahan-tany sy ny sehatra hafa toy ny fambolena, ny famokarana ary ny fialamboly, ary amin'ny fanaovana izany dia mandrisika ny Jamaikana tsirairay handray anjara amin'ny fanatsarana ny vokatra fizahan-tany ao amin'ny firenena, ny fihazonana ny fampiasam-bola ary ny fanavaozana ny toetr'andro. ary manasokajy ny sehatra mba hampiroboroboana ny fitomboana sy ny famoronana asa ho an'ireo Jamaikana namana. Hitan'ny Minisitera fa manakiana ny fahaveloman'ny Jamaika sy ny fahombiazany izany ary nanatontosa izany fomba izany tamin'ny alàlan'ny fomba fiasa feno, izay tarihin'ny Resort Boards, tamin'ny alàlan'ny fifampidinihana malalaka.
Ny fahafantarana fa ilaina ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa matotra eo amin'ny sehatra tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana mba hahatratrarana tanjona kendrena, ny ivon'ny drafitry ny Minisitera dia ny fitazonana sy hikolokoloana ny fifandraisany amin'ireo mpandray anjara lehibe rehetra. Raha manao izany dia inoana fa miaraka amin'ny drafitra lehibe momba ny fampandrosoana maharitra fizahan-tany ho toy ny mpitari-dalana ary ny drafitra nasionaly ho an'ny fampandrosoana - vina 2030 ho fari-piainana - ny tanjon'ny Ministera dia azo tanterahina ho tombontsoan'ny Jamaikana rehetra.
Fampahalalana bebe kokoa momba an'i Jamaika.
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 13: 38